Islaamka iyo la macaamilka dadka aan muslimka ahayn-DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Islaamka iyo la macaamilka dadka aan muslimka ahayn-DHAGEYSO
Published on November 13, 2012 by Admin 2 · 2 Comments · 3,571 views
Islaamku waa diin ay ku idil yihiin wax kasta oo wanaag ah, waana shareeco qadarisa aadanaha oo dhan, xitaa kuwa aan muslimka ahayn.
Xiriir ceynkee ah ayay tahay in uu dhex maro aadanaha kala diimaha iyo kala dhaqanka ah ee nool dunida guudkeeda.
Islaamku muxuu ka yiri xiriirka ay tahay in ay yeeshaan muslimiinta iyo gaalada, maxaase sal u ah xiriirkaas, colaad mise nabad?
Ma tahay arrin diinta sal ku leh in gaalada loo dilo oo kaliya in ay diin kale heystaan, mase bannaantahay in la weeraro kaniisadaha iyo macaabbidda dadka aan muslimka ahayn sidaba dhowr jeer ka dhacday dalka Kenya.
Shareecada Islaamkuse maxay ka qabtaa xiriir siyaasadeed, dhaqaale iyo ciidan oo dhex mara Muslimiinta iyo gaalada, waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Maxamed Cabdullaahi Maxamed.
Hoos ka dhageyso Barnaamijka.
bahjo says:	November 13, 2012 at 4:34 pm	waan salaamaya dadka muslimiinta by
Reply »	wadani10 says:	November 13, 2012 at 7:15 pm	mashaa allaah barnaamij yada nuucaan oo kale bahda radio muqdisho hala sii wado